Banyere Anyị - Weihai Tonglian nkenke Machinery Co., Ltd
Weihai tonglian nkenke ígwè co., Ltd na-emi odude ke mma ala gbara osimiri okirikiri obodo - Weihai obodo Shandong n'ógbè. ọkachamara na mmepụta nke azu, golf n'ichepụta ngwá, na ihe ịga nke ọma ndọtị nke mmepe nke nnukwu dayameta iko tube, ndị ọzọ ụlọ ọrụ carbon tube olu ubi ịkpụzi akụrụngwa. N'otu oge ahụ na-akwado iche iche isi ebu, metal ngwa mma na elu àgwà azu mkpara.
The ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na ya oruru na 2001, mgbe ifufe na mmiri ozuzo ịsa, tempering, a pụrụ ịdabere na ngwaahịa mma na ike n'ezi ihe nke ọrụ aha, na-kasị ọkachamara ụlọ ọrụ ndú. Product best-ere obodo na exported na Japan, France, Syria, India, Vietnam, Taiwan na mba ndị ọzọ na mpaghara, òkè nke n'elu ọrụ.
Tonglian uche laghachi ịzụlite "Tong lian" na-eto eto sturdily na tụụrụ ala nke echiche ebe a, na-achọpụta ihe ọhụrụ ngwaahịa, magburu onwe ya mma na ọhụrụ ọrụ echiche, ozi na anụ ụlọ akụ azụ ụlọ ọrụ na ndị ọzọ ọrụ ọtụtụ ihe mejupụtara anwụrụ emeputa, mbo mbuli mmepe nke ụlọ ọrụ!